आज मात्रै सबैभन्दा धेरै २७ अन्तर्राष्ट्रिय उडान – धेरै उडान कतार, मलेसिया र दुबइको । – Yuwa Aawaj
असार २८, २०७८ सोमबार 79
राजु सुवेदी, काठमाडौ : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौंले २०२१ जुलाई १२ सोमबारलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडान तालिका प्रकाशित गरेको छ।
उक्त तालिकामा सोमबार हुने सबै प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय उडानको विवरण दिएको छ। कोरो’नाले बिस्वब्यापी लक’डा’उन भएपछी बन्द भएका उडानहरु बिस्तारै खुल्दैछ ! उडान खुलेपछिको सबै भन्दा धेरै उडान आज भर्नेछन बिमानहरुले ।
आज मात्रै कर्गो तथा नियमित गरेर २७ उडान गर्नेछन ल्याउने लाने गरेर ! सबैभन्दा धेरै उडान कतारको लागि छन ! कतार एयरवेज र नेपाल एयरलाइन्स ले कतार बाट ल्याउने तथा यात्रु लानेछन ।
त्यसैगरी नेपाल एयरलाइन्स ले नै मलेसिया यात्रु लिएर जानेछ तथा लिएर फर्किनेछ ! हिमालय एयरलाइन्स ले साउदी दमाम तथा बेन्कक र कर्गो उडानको लागि आजै अनुमती लिएको छ ! जजिरा एयर ले कुबेत तुर्किस एयरलाइन्स ले इस्तानबुल
बाट र नेपाल एयरलाइन्स ले नै दुबै बाट यात्रु लिएर जाने आउने गर्दछन ! समय तथा बिस्तृत जान्न तल तालिकामा हेर्नुहोस ! आज यात्रा गर्ने सबैको लागि शुभकामना ! फ्लाइट सम्बन्धी जानकारीको लागि हाम्रो वेबसाईट तथा पेज फलो गर्नुहोला ।
Prevमलेसियामा ५२ र साउदीमा २५ वटा नेपाल कामदारको श’व अल-पत्र !
Nextयूएईमा हा’र्टअ’ट्याक भई मृ’त्यु भएका सुशील परियारको परिवारलाई नेस्टो कम्पनीले गर्यो यति ठुलो ।
एकैदिन कतारको यती धेरै उडान – दुबइ मलेसिया साउदीको लागि कती ? (आजको उडान तालिका)
प्रचण्ड भन्छन् : शान्ति प्रक्रियामा आउँदा ५२ वर्षको थिएँ, अब अर्काे आ’न्दोलन थाल्छु ।
हार्दिक बधाई ! सुम्निमाले श्रेष्ठले कक्षा १२ को परीक्षामा गरिन् ‘नेपाल टप’…हेर्नुहोस ।